किन पा’तली केटी बढी मन प’राउँछन् तँ केटाहरु ? - UjyaloNepal
किन पा’तली केटी बढी मन प’राउँछन् तँ केटाहरु ?
कसैलाई स्लिम केटीहरू से’क्सी लाग्छन् भने कसैलाई मोटा। यो व्य’क्तिपिच्छे फरक पर्ने कुरा हो।
पातलो शरीर छिनेको कम्मर भएकी युु’वतीले जो कोहि यु’वालाई पनि सजिलै आ’कर्षित गर्न सक्दछिन् । सामान्यतया मोटो शरीर भन्दा सरलक्क ज्या’नमा भएकी यु’वती नै यु’वाहरुको रोजाइमा पर्ने गरेको विभिन्न अ’ध्ययन अनु’सन्धानहरुले पनि पुष्टि गरिसकेको छ । इ
भोलुुसनरी फिटनेस’ नामक एक उप’न्यासमा पु’रुषहरुले जिवनसाथी रोज्दा किन पातलो शरीरमा बढि ध्या’न दिन्छन् भनि लेखिएको पनि छ ।
पु’रुषहरुले पातली यु’वती बढि राम्री र स्व’स्थ हुने पू’धारणा बनाएका हुन्छन् र केहि हदसम्म यो साँचो पनि हो । विभिन्न देशहरुमा हुने आ’कर्षक यु’वती प्र’तियोगितमा यु’वतीको पातलो शरीरलाइ पहिलो प्रा’थमिकता दिएर मु’ल्याङन गर्ने गरिएको छ ।
अ’न्तर्राष्ट्रिय स्त’रमै हेर्ने हो भने यु’वतीहरुको शरीर इन्डेक्स १९ हुँदा अ’साध्यै आ’कर्षक हुने रेट गरिएको छ ।
आ’दर्श र मोडल हुनको लागि भने बडी माक्स इन्डेक्स २४ देखि २४.८ हुनुपर्ने बताइएको छ । मसिनो शरीरले वा’स्तविक भन्दा कम उमेर देखाउने भएकाले पनि यस्ता केटीहरु पु’रुषहरुलाइ साह्रै मन पर्छन् ।
युरोपियन, अ’फ्रिकन र एसियन रा’ष्ट्रका यु’वतीहरुमा परिक्षण गरि हेर्दा यो सत्य साबित भएको छ ।
मोटी केटीहरु कम आ’कर्षित देखिनुका साथै पु’रुषहरुको तुलनामा उनीहरुमा म’धुमेह, हृ’दयधात तथा प्र’जनन स’म्बन्धी रोगहरु लाग्ने खतरा हुने स्पि’कम्यान बताउँछन् ।
कांग्रेसमा एमालेका कार्यकर्ता प्रवेश लहर
जानै ,गर्भावस्थामा यौन सम्बन्ध राख्नु कति सुरक्षित ?